Faa'iidada geedaha farshaxan | JIAWEI
Noocyada kala duwan ee geedaha macmalka ah way badan yihiin, qaabkuna waa dhammaystiran yihiin. Iyada oo ku saleysan fikradda "cagaaran, deegaanka, saaxiibtinimo, sahlan oo qurux badan", waxaan ku dadaalnaa inaan abuurno suuq gaar ah oo loogu talagalay dhirta jilicsan, si aan u fududeyno nolosha dadka suuxinta, beddelo isku darka quruxda badan ee jawiga guriga, iyo dib u qaabaynta dadka nolosha ayaa buuxisa adduunka. leh raaxo qurux badan oo abuuraya is waafajin, sahlan oo qurux badan bay'ada qurxinta guriga.
Hadda aan eegno faa'iidooyinka dhirta isku-eka
Midda koowaad: Marka ugu horeysa, goobta ugu horeysa ee dadku ay ku dooranayaan warshad jilicsan ayaa loo adeegsadaa qurxinta. Tan iyo markii loo isticmaalay in lagu qurxiyo dabeecadda maxaa yeelay waa mid macquul ah oo muuqata, saamaynta qurxintu waa mid qurux badan oo ku filan. Dhirta dabiiciga ah kuma koobna xaaladaha dabiiciga ah sida qorraxda, hawada, biyaha iyo xilliga xilli roobaadka. Dunida cagaaran sida gu'ga sanadka oo dhan. Wadamo kala duwan, meelo kala duwan ayaa loo isticmaali karaa sida qurxinta, sida jardiinooyinka, meelaha muuqaalka ah, aagagga ganacsiga, dhismayaasha la dego, balaasadaha, suuqyada waaweyn ee ganacsiga, waddooyinka iyo wabiyada, iwm., waa la qurxin karaa oo leh geedo aan dabiici ahayn.
Midda labaad: Dhirta farshaxanku uma baahna daryeel maalinle ah oo gaar ah. Biyo ha siin ama ha bacrin. Waxaan u baahanahay oo keliya inaan ku tirtirno shukumaan qoyan marka caarada caleemaha ay jirto maxaa yeelay waxaa jiri doona busta muddo dheer. Looma baahna in laga walwalo in dhirtu ay engegto oo ay engejiso. Waxay sidoo kale keydisaa kharashaadka maamulka maalin walba iyo tamarta.
Midda saddexaad: Iyada oo ay weheliso horumarinta agabyada dhismaha, fikradaha naqshadeynta iyo hal-abuurka ayaa la xoreeyay, dhul aad u tiro badan oo dheeri ah ayaa ka muuqda nolosheena. Warshad dabiici ah waxay soo bandhigaysaa calaacal leh jardiinooyin firfircoon oo heer sare ah oo qolka soo gala, oo kali ah si ay ula kulmaan baahida loo qabo boos noocan oo kale ah iyo abuurista muuqaalka muuqaalka ayaa xaqiiqsaday in dhirta caadiga ah aaney gaari karin.